केटी मान्छेहरु यस्ता केटाहरुलाई मन पराउँछन् - यादका टुक्रा
हरेक केटिलाइ फरक फरक प्रकारका केटाहरु मन पर्छन। केटीहरु केटामा यस्ता गुणहरु खोज्छन जसमा उनीहरु प्रति इमान्दारी र बफादारी मिलोस् । कुनै पनि सम्बन्धमा यो जरुरि हुन्छ कि, त्यहाँ एकअर्का बीच सम्मानको साथमा एकअर्काको गुणहरु प्रति आकर्षण पनि होस्। आउनुहोस जानौ केटाहरुका यस्ता गुणका बारेमा जसले केटि मान्छेलाई आकर्षित गर्छन्।
Don't Miss it कहिलै पनि नफ्याल्नु बासीभात, यति गरे जडी ओखति बन्दछ
Up Next आफ्नी प्रेमिकालाई ‘म साँचो प्रेम गर्छु’ भनेर कसरी महसुस गराउने?
सोसियल मिडियाबाट जीवन साथि खोज्नु सहि हो या गलत?
आजकलको समयमा केटा होस या केटि जोकोही आफ्नो लागी परिपुर्ण जिवन साथी चाहान्छन्। यसको खास कारण लगातार सम्बन्ध टुट्नु र…
1 day ago 1543 Views
प्रेम एक मिठो अनुभूति हो। प्रेमको बर्षातमा हरकोही एकपटक भिज्न चाहन्छ। हुनत प्रेम मात्र दुइ अक्षरको छ तर जब कोहि…
यी १० कारण नबुझेपछि ह्वात्तै बढ्छ तपाईको तौल
दिनदिनै दौडिनुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ। खाना बार्नुहुन्छ। क्यालोरी नाप्नुहुन्छ। तर पनि मोटाउनु छोड्नुभएन। के भयो त ? पक्कै केही न केही…
4 days ago 237 Views
सात किसिमको मोटोपनः कुन बढी खतरनाक ? कुन साधारण ?
जसरी हरेक व्यक्तिको शारीरिक बनौट फरक हुन्छ, उसैगरी मोटोपन पनि एकनास हुँदैन। जुनसुकै कारण होस्, मोटोपनलाई त्यती राम्रो मानिदैन। यसले…
सामान्यतया महिलाको अनुहार र हातखुट्टामा पनि कम मात्रामा रौं पलाउने गर्छ। केटाहरूको दारी आउँछ केटीहरूको आउँदैन। तर कतिपय केटीहरूको पनि…
4 days ago 395 Views
प्रेमिकाले धोका पो दिइरहेकी छिन् कि ? थाहा पाउने ट्रिकहरु
भलै यो प्रसंग तपाईलाई हल्काफुल्का लाग्न सक्छ । किनभने हामी वैंशालु उमेरमा गरिने प्रेमलाई लहड मात्र ठान्छौं । तर, हरेकले…
8 months ago 607 Views
पतिका ५ यस्ता हर्कतः जसले पत्नीलाई रिस उठ्छ
बिवाहका बारेमा संसारभर धेरै राम्रा कथाहरु छन् । मानिस सामाजिक प्राणी भएको केहि समय पछि नै बैवाहिक व्यवस्था कायम भएको…
10 months ago 5465 Views
लिभ इन रिलेसनमा बस्नु भन्दा अगाडी थाहा पाउनु पर्ने कुरा हुन् यी
5 months ago 521 Views
12 hours ago 6315 Views
11 hours ago 3438 Views
10 hours ago 2306 Views
11 hours ago 1969 Views
10 hours ago 1633 Views